उत्तर कोरियाको आकाशमा अमेरिकी लडाकू विमान, अब के गर्छ उत्तर कोरीया ? – Etajakhabar
उत्तर कोरियाको आकाशमा अमेरिकी लडाकू विमान, अब के गर्छ उत्तर कोरीया ?
वासिङ्टन, ८ – अमेरिकी बमवर्षक तथा युद्धक विमानलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले शनिबार उत्तर कोरियाली सामुद्रिक सीमानामा पर्ने आकासमा उडाइएको छ । बमवर्षक र युद्ध विमान अमेरिकी क्षेत्र गुआम र ओकिनावा जापानबाट उडेका बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०८, २०७४ समय: १५:२९:२७